Nayakhabar.com: कोइराला बाथरुममा लडेका थिए
कांग्रेस सभापति एवं पूर्वप्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको अन्तिम श्रद्धाञ्जली दिन उपस्थित पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताहरुले बुधबार पनि बारम्बार एउटै प्रश्न गरे,’सुशील ‘दा’लाई किन अस्पताल लगिएन रु’ यसको जबाफ दिने त्यहाँ कोही भएनन् । पार्टीका नेताहरु यस्ता प्रश्नको घेराबन्दीमा बारम्बार परिरहँदा उनीहरु प्रतिक्रियाविहिन भएर शीर निहुराएका थिए ।
२५ गते जिल्लाका अधिवेशन सकिएपछि उम्मेदवार तय गर्न छलफल गर्ने योजनामा कोइराला थिए । बरिष्ठ नेता शेरवहादुर देउवा, उपसभापति रामचन्द्र पौडेल, महामन्त्री प्रकाशमान सिंह राजधानीमै थिए । उनीहरुलाई पनि कोइरालाको गम्भिर अवस्थाका बारेमा जानकारी गराईएको थिएन । परिवारका सदस्यहरुसंग मात्रै परामर्श भइरहेको थियो । कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य मिनेन्द्र रिजाल स्वास्थ्य तलमाथि भईरहने गरेको बताउँछन । ‘चिसो हुँदा गल्ने र घाम लाग्दा अघिपछिजस्तै क्रियाशील हुने गर्नुहुन्थ्यो’ रिजाल भन्छन,’तर यस्तो अवस्था होला भनेर हामीले सोचेका पनि थिएनौं ।’ साढे दुई बजे निधनको खवर भतिज अतुलले जानकारी गराउँदा आफैले विस्वास नलागी अन्त्यैबाट घट्ना पुष्टी गरेको रिजालले बताए । ‘सभापतिमा आफै उठ्नु भयो भने फागुन लागेपछि १०र१२ जिल्लामा जाने र आफै नउठेपनि सहयोग जुटाउन ५र७ जिल्लामा जानुपर्छ भन्ने थियो’ रिजालले भने,’उहाँको स्वास्थ्य अवस्था क्रोनिकनै थियो । तर, अहिल्यै यस्तो होला भन्ने लागेको थिएन ।’
कोइराला केही समयदेखिनै बिरामी थिए भन्ने जानकार परिवारका सदस्यहरुलाई नभएको होइन । पार्टीको महाधिवेशन देशभरी चलीरहेका बेला कोइरालाको अस्पताल भर्नाले नकारात्मक सन्देश जाने सोचले उहाँलाई अस्पताल भर्ना गरिएको थिएन । कोइराला निकट केन्द्रीय सदस्य बलवहादुर केसी पूर्व प्रधानमन्त्री र पार्टीको सभापतिजस्तो व्यक्ति विरामी पर्दा राज्यले थाह नपाउनु दुःखको कुरा भएको बताउँछन । २४ गते विहान सोलुखोम्बुको महाधिवेशनका बिषयमा कोइरालासंग कुराकानी भएको स्मरण गर्दै केसीले आफूलाई अन्तिम अवस्थामा पुग्नेगरी विरामी भएको भन्ने थाह नभएको बताए । ‘उहाँलाई अस्पतालनै लैजानुपर्दथ्यो, नीजि चिकित्सकले के गरे रु किन लगेनन रु भित्री कुरा थाह भएन’ उनले भने,’जिल्ला अधिवेशनको मत गणना हुँदाहुदै निधनको खवर आउँदा ‘सक’ नै भए । अस्पताल लगेको भए अहिले उठेका दश खालका आशंका पनि उठ्ने थिएन ।’
नीजि चिकित्सक करवीर योगीले सहिद गंगालालको ६०१ नम्वर कोठा बुक गरेको समेत जानकारी गराएका छन् । अस्पताल लैजाने तयारी गरिएको बताउदै तत्काल एम्बुलेन्स नपाएको जानकारी समेत योगीले गराएका छन् । जवकि कोइरालाका चढ्ने र सुरक्षा चढ्ने गाडीनै निवासमा थिए । कोइराला बसेका निवासबाट ५ मिनेटकै दुरीमा अस्पताल छन् । ‘निधननै भएपछि अस्पताल लगेर भेन्टीलेटरमा राखेर भएपनि राष्ट्रलाई जानकारी दिनुपर्दथ्यो’ पार्टीका एक पदाधिकारीले भने,’शंका, उपशंका भन्दापनि हेलचक्राई भएको देखियो ।’
कोइराला केही समयदेखिनै बिरामी थिए भन्ने जानकार परिवारका सदस्यहरुलाई नभएको होइन । पार्टीको महाधिवेशन देशभरी चलीरहेका बेला कोइरालाको अस्पताल भर्नाले नकारात्मक सन्देश जाने सोचले उहाँलाई अस्पताल भर्ना गरिएको थिएन । कोइराला निकट केन्द्रीय सदस्य बलवहादुर केसी पूर्व प्रधानमन्त्री र पार्टीको सभापतिजस्तो व्यक्ति विरामी पर्दा राज्यले थाह नपाउनु दुःखको कुरा भएको बताउँछन । २४ गते विहान सोलुखोम्बुको महाधिवेशनका बिषयमा कोइरालासंग कुराकानी भएको स्मरण गर्दै केसीले आफूलाई अन्तिम अवस्थामा पुग्नेगरी विरामी भएको भन्ने थाह नभएको बताए । ‘उहाँलाई अस्पतालनै लैजानुपर्दथ्यो, नीजि चिकित्सकले के गरे ? किन लगेनन ? भित्री कुरा थाह भएन’ उनले भने,’जिल्ला अधिवेशनको मत गणना हुँदाहुदै निधनको खवर आउँदा ‘सक’ नै भए । अस्पताल लगेको भए अहिले उठेका दश खालका आशंका पनि उठ्ने थिएन ।’
- See more at: http://www.nepaljapan.com/%E0%A4%95%E0%A5%8B%E0%A4%87%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%B2%E0%A4%BE-%E0%A4%AC%E0%A4%BE%E0%A4%A5%E0%A4%B0%E0%A5%81%E0%A4%AE%E0%A4%AE%E0%A4%BE-%E0%A4%B2%E0%A4%A1%E0%A5%87%E0%A4%95%E0%A4%BE-%E0%A4%A5/#sthash.o3Z8ZcGw.dpuf